जलपन्छी गन्ने काम सुरु भयो – Ketaketi Online
January 2, 2022 January 2, 2022 Ketaketi OnlineLeaveaComment on जलपन्छी गन्ने काम सुरु भयो
२०७८ पुस १८/ शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका क्षेत्रमा शनिबारदेखि जलपन्छी गन्ने काम सुरु गरिएको छ । निकुञ्ज भित्रका र बाह्य क्षेत्रका तालतलैया तथा नदीमा जलपन्छी गन्ने काम सुरु गरिएको हो । गन्ने काम अगामी माघ २ गतेसम्म जारी रहने छ ।
यसका लागि निकुञ्ज कार्यालयका कर्मचारी, नेपाल पन्छी संरक्षण संघका विज्ञहरु, हिमाली प्रकृति, एनटिएनसी, नेचर गाइड एशोसिएशनका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता छ । गणनामा संलग्नले वाइनाकुलर, टेलिस्कोप, क्यामेरा लगायतको प्रयोग गरिएको संघका चराविज्ञ हिरुलाल डगौराले जानकारी दिनुभयो ।
स्थलगतरूपमा पुगेर र कुनै ठाउँमा डुङ्गा लगायतमा चढेरसमेत जलपक्षी गणना हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रानीताल, ताराताल, कालीकिच ताल, बेदकोट, बन्दाताल, पुरैनीताल, प्याराताल, स्याली नदी, चौधर नदी र सीमसार क्षेत्रमा जलपक्षी गणना हुने छ । अरु ताल र नदीमा पैदल हिँडेरै गणना हुने भए पनि निकुञ्जभित्रको सलगौँडी तालमा भने हात्तीमा चढेर गणना हुने छ ।
“तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्रका रैथाने र आगन्तुक चराको वितरण र अवस्था पत्ता लगाउन, सङ्ख्याको अद्यावधिक गर्न, संरक्षणमा स्थानीय समुदाय र सरोकारवाला निकायलाई सहभागी बनाई सचेतना अभिवृद्धि र संरक्षणमा हातेमालोका लागि हरेक वर्ष जलपन्छीको अनुगमन र गणना हुँदै आएको बताइएको छ । यस वर्ष जलपन्छीले बस्ने तालको अवस्थाका बारेमा समेत जानकारी लिइनेछ । तालबारे जिपीएस लोकेशन समेत लिइनेछ । पानीको सतह विगतमा कस्तो थियो ? अहिले कस्तो छ ? यसबारे रेकर्ड राखिने जानकारी दिइयो ।
जलपन्छीका कुन–कुन प्रजाति विगतका वर्षमा आएका थिए । यस वर्ष कुन–कुन देखिए यसबारे समेत रेकर्ड राखिनेछ । यससँगै सिमसार क्षेत्रको अवस्था, तालमाथिको मानवीय अतिक्रमण प्राकृतिक रूपमा भएको क्षतिबारे समेत जानकारी लिइन्छ । गत वर्षको गणनामा निकुञ्ज र बाह्य क्षेत्रका तालतलैयामा जलपन्छी गणनाका क्रममा विश्वकै दुर्लभ सारस, भुडिफोर गरुड, कैले टाउके हाँसलगायत ४८ प्रजाति देखापरेका थिए । तालतलैयामा जलपन्छीको सङ्ख्या यकिन गर्ने कार्यसँगै सिमसारको अवस्थाबारेमा समेत अध्ययन हुने विज्ञ डगौराले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सीमसार क्षेत्र, आहारा, सुरक्षा र गुँड लगाउनका लागि पर्याप्त स्थान भएकाले बसाइँ सार्दै पाहुना जलपक्षी यहाँका सीमसार क्षेत्र, तालतलैया, नदीलगायतका क्षेत्रमा पुग्ने गर्दछन् । केही जलपन्छी चिसो छल्नका लागि साइवेरिया लगायतका क्षेत्रबाट लामो दूरी तय गरी यहाँको बाटो प्रयोग गरी भारत र श्रीलङ्कातर्फ जाने गरेका छन् । बाटोको प्रयोग गर्ने क्रममा यहाँका तालतलैयामा बस्ने गरेका छन् ।
यसैगरी शनिबारदेखि कैलालीको तालतलैया र सीमसार क्षेत्रमा समेत जलपन्छी गन्ने काम सुरु गरिएको छ । घोडाघोडी ताल क्षेत्रबाट जलपन्छी गन्ने काम सुरु गरिएको चराविज्ञ डगौराले जानकारी दिनुभयो । गत वर्षको गणनामा कैलालीका जलाधार क्षेत्रमा ३२ प्रजातिका जलपक्षी देखापरेका थिए ।
February 12, 2022 February 20, 2022 Ketaketi Online
January 19, 2022 Ketaketi Online